လူ့ ဦး နှောက် cortex ၏အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
လူ့ဦးနှောက် cortex (2008) ၏ Neurodevelopmental ဘယ်နေရာတွေမှာလဲ
J ကို neuroscience ။ 2008 Apr 2;28(14):3586-94. doi: 10.1523/JNEUROSCI.5309-07.2008.
Shaw P ကို1, Kabani NJ, Lerch JP, Eckstrand K သည်, Lenroot R ကို, Gogtay N ကို, Greenstein: D, Clasen L ကို, အီဗန်တစ်ဦးက, Rapoport JL, Giedd ဖြစ်မှု, ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု SP.
ဦး နှောက် cortex ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုနားလည်ခြင်းသည်အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဗဟိုအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ cortical မြေပုံများဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ, ဗိသုကာမြေပုံများတည်ဆောက်ရန် postmortem တစ်ရှူးများ၏စာမေးပွဲအပေါ်နီးပါးသီးသန့်မှီခိုပါပြီ။ ဤမြေပုံများကိုလျော့နည်းရှုပ်ထွေးသောခြုံငုံမှုပုံစံနှင့်အတွင်းပိုင်း granular အလွှာမရှိခြင်းနှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော laminar ဗိသုကာနှင့်အတူသူတို့အားနည်းပါးလာပိုင်းခြားသိမြင်အလွှာနှင့်အတူဒေသများ, လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုခွဲခြားပါပြီ။ ယခင်အများအပြား agranular limbic ဒေသများပါဝင်သည်, အဆုံးစွန်သောအသင်းအဖွဲ့နှင့်အာရုံခံ cortex ၏ homotypical နှင့် granular ဒေသများပါဝင်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရိုးရာမြေပုံများကို noninvasive neuroimaging မှဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဒေတာများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ cortical အထူအတွက်အပြောင်းအလဲများပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးများနှင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် 764 ကနေ longitudinal ဝယ်ယူ 375 neuroanatomic သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်တွေကနေ vivo အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် cerebrum ကို ဖြတ်၍ cortical ကြီးထွားမှု၏ရှုပ်ထွေးမှုအဆင့်ဆင့်ကိုတွေ့ရှိပြီး၎င်းသည်တည်ဆောက်ထားသည့်ဗိသုကာဆိုင်ရာမြေပုံများနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိသည်။ အများစုခြေလက်areasရိယာများအပါအဝင်ရိုးရှင်းတဲ့ laminar ဗိသုကာနှင့်အတူ cortical ဒေသများ, အများစုရိုးရှင်းတဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းလမ်းကြောင်းပြသပါ။ ဤဒေသများသည်နို့တိုက်သတ္တဝါအားလုံး၏ ဦး နှောက်အားလုံးတွင် homologues များကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအစောပိုင်းနို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဆနျ့ကငျြ, cysex ၏ polysensory နှင့် high-order ကိုအသင်းအဖွဲ့ဒေသများ, သူတို့ရဲ့ laminar ဗိသုကာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရှုပ်ထွေးဆုံးဒေသများမှာလည်းရှုပ်ထွေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းရှိသည်။ ဤဒေသအချို့သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုဆင့်ကဲပြောင်းလဲစေသည့်ထူးခြားချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်မျောက်ဝံများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာတိုးချဲ့ထားသည်။ ထို့အပြင်ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း၏အဓိကလက္ခဏာတစ်ခု (အထွတ်အထိပ် cortical အထူမှီ၏အသက်အရွယ်) ကိုပုံဖော်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး နှောက် cortex ၏ရွေ့လျားမှု၊ သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခြင်းများကိုအချိန်ကုန်ပြီးသောအစီအစဉ်များမှတဆင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
လူ့ဦးနှောက် cortex အများစုဟာမြေပုံ (ပိုမကြာသေးမီက, မော်လီကျူးအမှတ်အသားများထိုကဲ့သို့သောဆဲလ်အသေကောင်သို့မဟုတ် myelin ၏ဖြန့်ဖြူးအဖြစ်, histological features တွေအတိုင်း partitioned နှင့်ကြပါပြီဗွန် Economo နှင့် Koskinas, 1925; Ongur et al ။ , 2003; Zilles et al ။ , 2004) ။ အတော်ကြာမျိုးစိတ်အကြားအလားတူအမျိုးအစားခွဲခြားမှုများနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်များကိုပေးစွမ်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှစ်ခုကျယ်ပြန့် cortical အမျိုးအစားများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုမှာအမျိုးအစား, allocortex, ပြင်းပြင်းထန်ထန်တွားသွား၎င်း၏ homologues နဲ့တူအောင်နေတဲ့စရိုက်တွေသုံးအလွှာပုံစံရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်အမျိုးအစား, isocortex, ထိုကဲ့သို့သော homologues ကင်းမဲ့ကျော်အလွှာသုံးလွှာ (ပုံမှန်အားဖြင့်ခြောက်လ) ကသွင်ပြင်လက္ခဏာပိုမိုဆင်းသက်လာဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး afferent နှင့် efferent စီမံကိန်း၏တစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေးပုံစံ (Kaas, 1987; Puelles, 2001; Allman et al ။ , 2002; Striedter, 2005) ။ allocortex နှင့် isocortex အကြား, တခါတရံတွင် "အကူးအပြောင်း cortex" ဟုခေါ်ဒေသများအလယ်အလတ်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ neuroimaging အသုံးပြုခြင်း Vivo အတွက် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကျနော်တို့ cortex ပြပွဲဤအမျိုးမျိုးကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌မိမိတို့တိုးတက်မှု၏ဘယ်နေရာတွေမှာအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုအဆင့်ဆင့်အသီးသီးအသောဖြစ်နိုင်ခြေစူးစမ်း။
ကွန်ပျူတာ neuroanatomy အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့ 40,000 ကျန်းမာကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဆောင်များတွင်အတွက် cerebrum တစ်လျှောက်လုံး 375 ကျော်အချက်များမှာ cortical ထူသတ်မှတ်ပါတယ်။ cortical အထူနှစ်ဦးစလုံး cortex ၏ columnar ဗိသုကာဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုနှင့်လက်တွေ့လူဦးရေ (မှအထိခိုက်မခံသောမက်ထရစ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရLerch et al ။ , 2005; O'Donnell et al ။ , 2005; Makris et al ။ , 2006; Shaw et al ။ , 2006a,b; lu et al ။ , 2007; Sowell et al ။ , 2007).
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်များတွင်အတွက်သားသမီးများ၏အများစုမှာ neuroanatomic ပုံရိပ်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့ကြောင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့ longitudinal အချက်အလက်များကို longitudinal ဒေတာအထူးသဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုပုံစံ Cross-Section ဒေတာနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ cortical ထူဘို့, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုဖော်ပြရန်တပ်ဆင်နိုင်အရိုးရှင်းဆုံးလမ်းကြောင်းဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးကြီးထွားမော်ဒယ်များ cortical ထူအတွက်တိုးနှင့်ကျဆင်းခြင်း၏ကွဲပြားအဆင့်ပါဝင်သည်: တစ် quadratic မော်ဒယ်နှစ်ခုထိုကဲ့သို့သောအဆင့် (ကျဆင်းနေရှေ့တော်၌အထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိရာပုံမှန်အားဖြင့်ကနဦးတိုး) ရှိပြီးတစ်ကုဗမော်ဒယ်သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ တိုးတက်မှု၏ရှုပ်ထွေးသည့်နှောက် cortex ဖြတ်ပြီးကွဲပြားစေခြင်းငှါ, ကြှနျုပျတို့သညျဤအပြောင်းအလဲ cytoarchitectural ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ aligned ရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းရန်ရှာ၏။
ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းအမျိုးမျိုးအချက်များသို့ရောက်ရှိ၏အသက်အရွယ်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခါးဆစ်၏ဆင်းသက်လာဂုဏ်သတ္တိများ, မကြာခဏဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း (အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်သားရေလုပ်သမား et al ။ , 1976; Jolicoeur et al ။ , 1988) ။ cortical ထူဘို့, အထွတ်အထိပ် cortical အထူ (တိုး cortical ထူအတွက်ကိုလျော့ချဖို့လမ်းပေးသည်ရှိရာအချက်) အထိရောက်ရှိခဲ့သည်သောမှာအသက်အရွယ်တစ်ကုဗသို့မဟုတ် quadratic (သို့သော် linear မဟုတ်) လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုကိုနှင့်အတူ cortical မှတ်ဘို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်နိုင်ပြီး, အရှင်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးအလားအလာအသုံးဝင်သောအညွှန်းကိန်း။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ဒါ့အပြင် polymodal, High-အလို့ငှာအသင်းအဖွဲ့ဒေသများ (မတိုင်မီအထွတ်အထိပ် cortical ထူမရရှိစမူလတန်းအာရုံခံဒေသများနှင့်အတူတစ် heterochronous sequence ကိုအရင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အတည်ပြုခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ဖို့, အ cerebrum ဖြတ်ပြီးအထွတ်အထိပ် cortical အထူပညာရေးပုံစံကိုလေ့လာGogtay et al ။ , 2004).
သုံးရာခုနစ်ဆယ်ငါးကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်, စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်အာရုံကြောချို့ယွင်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူကျန်းမာကလေးများ, 764 သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်တွေစုစုပေါင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဘာသာရပ်တစ်ခုစိစစ် tool ကိုအဖြစ်ကလေးဘဝအပြုအမူစာရင်းပြီးစီးခဲ့ပြီးတော့မဆိုစိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်အာရုံကြော diagnoses (ထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့ကလေးတစ်ဦးစိတ်ရောဂါကစနစ်တကျအဖြေရှာတဲ့အင်တာဗျူးခံယူGiedd et al ။ , 1996) ။ သန် (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆော့ဖလက္ခဏာတွေဘို့အာရုံကြောစာမေးပွဲ) ကို PANESS သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်, နှင့် 336 (90%) 20 (5%), အများစုနေထိုင်ပြီးသန်-လက်ဝဲနှင့် 19 (5%) ambidextrous အများစုနေထိုင်ပြီးညာသန်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Wechsler ထောက်လှမ်းရေးအကြေးခွံများအသက်အရွယ်သင့်လျော်သောဗားရှင်း (ထံမှစိတ်ပိုင်းဖြတ်အဖြစ်ယုတ်ထောက်လှမ်းရေးလဒ် (အိုင်ကျူ) 115 (SD, 13) ခဲ့Shaw et al ။ , 2006b) ။ လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်း (SES) ကို Hollingshead အကြေးခွံကနေဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်နှင့်ယုတ်ရမှတ် 40 (SD, 19) (ခဲ့သည်Hollingshead, 1975) ။ အဆိုပါအသက်အပိုင်းအခြားနှစ်ပေါင်း 3.5 မှ 33 ကနေသရုပ်ဆောင်နှင့် Scan ဖတ်၏အသက်အရွယ်ဖြန့်ဖြူးအတွက်သရုပ်ဖော်နေသည် ပုံ 1။ အဆိုပါဘာသာရပ်များ 292 ကွဲပြားခြားနားသောမိသားစုများကနေ လာ. , 196 (52%) အထီးရှိကြ၏။ အဆိုပါအသက်အပိုင်းအခြား 3.5 နှစ် 33 ကနေသရုပ်ဆောင်။ အားလုံးဘာသာရပ်များအနည်းဆုံးဖတ် (; SD, 12.3 5.3 နှစ်ကနဦးစကင်မှာအသက်အရွယ်ကိုဆိုလိုတာ) ရှိခဲ့; 203 (54.1%) ကအနည်းဆုံးနှစ်ခု Scan ဖတ် (; SD, 13.8 အသက်, 4.6 ဆိုလို) ရှိခဲ့; 106 (28.3%) ကအနည်းဆုံးသုံး Scan ဖတ် (; SD, 15.3, 4.2 ဆိုလို) ရှိခဲ့; နှင့် 57 (15.2%) (18, SD က 4.5 ဆိုလို) လေးယောက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို Scan ဖတ်ခဲ့ရတယ်။
ယင်းအချက်အလက်များ၏အသက်အရွယ်ဖြန့်ဖြူး။ တစ်ခုချင်းစီကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုမှာအသက်အရွယ်အပြာရောင်စိန်ပွင့်အားဖြင့်ညွှန်ပြနေသည်။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်ပထမဦးဆုံးစကင်ကိုအမြဲ leftmost ဖြစ်၏ အထပ်ထပ် Scan ဖတ်နှင့်အတူဘာသာရပ်များအကြာတွင် Scan ဖတ်မှာအသက်အရွယ်နှင့်အတူပထမဦးဆုံးစကင်မှာအသက်အရွယ်ကိုဆက်သွယ်ထားသောရေးဆွဲနေတဲ့ရေပြင်ညီမျဉ်းတစ်ကြောင်းရှိသည်။
axial ချပ်နှင့် 1 မီလီမီတာ Coronal ချပ်သုံးရှုထောင်ပျက်စီးကြောင်း gradient ကိုသုံးပြီးရယူခဲ့ကြသည်တဆက်တည်း 1.5 မီလီမီတာနှင့်အတူ T2.0 မာန်တင်းပုံရိပ်တွေဟာ 1.5-T က General Electric (Milwaukee, WI) Signa ကင်နာပေါ်တည်ငြိမ်ပြည်နယ်ထဲမှာပဲ့တင်သံပြန်ပြောပြ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း imaging parameters တွေကိုခဲ့ကြသည်: အချိန်ပဲ့တင်သံ,5ms; အထပ်ထပ်အချိန်, 24 ms; လှန်ထောင့်, 45 °; ဝယ်ယူ matrix, 256 × 192; စိတ်လှုပ်ရှားအရေအတွက်, 1; နှင့်အမြင်, 24 စင်တီမီတာ၏လယ်ပြင်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဦးခေါင်းနေရာချထား (စံခဲ့သည်Giedd et al ။ , 1999) ။ အလားတူကင်နာလေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါဇာတိ MRI Scan ဖတ် (က linear အသွင်ပြောင်းသုံးပြီးစံ stereotaxic အာကာသသို့မှတ်ပုံတင်နှင့် nonuniformity အပိုငျးအဘို့အတညျ့ခဲ့ကြသည်စွတ်ဖါး et al ။ , 1998) ။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်နှင့်တညျ့ volumes ကို (တစ်ဦးခေတ်မီအာရုံကြောအသားတင်ခွဲထုတ်သုံးပြီးအဖြူကိစ္စ, မီးခိုးရောင်ကိစ္စ, CSF နှင့်နောက်ခံသို့ segmented ခဲ့ကြသည်Zijdenbos et al ။ , 2002) ။ တစ်ဦးကမျက်နှာပြင်ပုံပျက်သော algorithm ကိုပထမဦးဆုံးအဖြူကိစ္စမျက်နှာပြင်နှင့်၎င်း၏မီးခိုးရောင်ကိစ္စမျက်နှာပြင်အဆွေတော်အသီးအသီး vertex အကြားလူသိများကြားဆက်ဆံရေး defining မီးခိုးရောင်ကိစ္စ-CSF လမ်းဆုံကိုရှာဖွေအပြင်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့, အဖြူကိစ္စမျက်နှာပြင်ကိုက်ညီသည့်လျှောက်ထားခဲ့သည်; cortical ထူသည်ဤဆက်နွယ်နေ vertices ကြားအကွာအဝေးအဖြစ်သတ်မှတ် (နှင့် 40,962 ထိုကဲ့သို့သော vertices မှာတိုင်းတာ) ဖြစ်ပါတယ် (Macdonald et al ။ , 2000) ။ တစ်ဦးက 30-မီလီမီတာ-bandwidth ကိုမှုန်ဝါးစေရန် kernel ကိုလျှောက်ထားခဲ့သည်; ဒီအရွယ်အစား (false positives အသေးအဖွဲအနေဖြင့်ဒီ bandwidth ကိုစာရင်းအင်းပါဝါ A မြင့်ဆုံးသောလူဦးရေ Simulator ၏အခြေခံပေါ်မှာရွေးချယ်ခဲ့သည်Lerch နှင့်အီဗန်, 2005) ။ 30 မီလီမီတာတစ်ပျံ့နှံ့လုပျငနျးစဉျခြောမှေ့သုံးပြီးမျက်နှာပြင်တလျှောက်မှုန်ဝါးစေရန် cortical topologic features တွေထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ညီမျှထုထည်ကြီးမားသော Gaussian Blur kernel ကိုထက်သိသိသာသာလျော့နည်း cortex ကိုယ်စားပြုအဖြစ်ဤ kernel ကို, ခန္ဓာဗေဒမူပြောင်းခြင်းခွင့်ပြုပါတယ်။
cortical အထူ၏ကျွမ်းကျင်သူကို manual neuroanatomical ခန့်မှန်းချက်ဆန့်ကျင်သည်ဤအလိုအလျောက်တိုင်းတာ၏တရားဝင်မှု (အရွယ်ရောက်လူဦးရေအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့် cortical ဒေသများဘို့ယခင်ကသရုပ်ပြခဲ့ပြီးKabani et al ။ , 2001) ကြှနျုပျတို့မူရင်းလေ့လာမှု (အကြိုနဲ့ post အလယ်ပိုင်း gyri, အသာလွန်တိုကျရိုကျ gyrus, အသာလွန်ယာယီ gyrus, အ cuneus, အသာလွန် parietal lobule နှင့် supramarginal gyrus) (တှငျပါဝငျအဆိုပါ cortical ဒေသများတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးလူဦးရေအတွက်ဒီ validation ကိုလေ့လာမှုထပ်ခါတလဲလဲKabani et al ။ , 2001) ။ ငါတို့သည်လည်းဤလေ့လာမှုများအတွက်အထူးစိတျဝငျစားဒေသများဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဤ insula, အ orbitofrontal (၎င်း၏ anterior နှစ်နိုင်ငံတိုင်းတာ, posterior, medial နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကွဲပြားမှု) cortex ရှိ. , cortical ဒေသများ (ထို anterior နှင့် posterior cingulate, အ medial dorsal prefrontal cortex, နှင့် parahippocampal gyrus) medial ။ နှစ်ဆယ် Scan ဖတ် (အသက်အရွယ်မရွေး6ထံမှ 15 မှတဆင့်) ကိုဆောင်များတွင်ထံမှကျပန်းမှာရှေးခယျြခဲ့သညျ။ အသီးအသီးကဦးနှောက်ဒေသများအတွက် neuroanatomist (NK) ပုံရိပ် (software ကိုလေ့လာဆန်းစစ်ရာတွင်အသုံးပြုMacdonald, 1996) တဦးတည်းအချက်သို့မဟုတ် tag ကိုပု cortex ၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ကိုကိုယ်စားပြုသော CSF နှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စနယ်စပ်အပေါ်, နှင့် cortex ၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ကိုကိုယ်စားပြုသောမီးခိုးရောင်ဖြူကိစ္စနယ်စပ်အခြားအချက် mark ရန်။ နှစ်ခု tags များအကြားအကွာအဝေးဟာ automated tool ကိုအသုံးပြုတဲ့ algorithm ကိုန်းမှာ, တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ပြင် cortical မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ neuroanatomist အားဖြင့်နေရာချပေးထားသော tag ကိုအဘို့, အလိုအလျှောက်ထုတ်ယူ cortical မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအနီးကပ်ဆုံး vertex ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ် cortical ထူမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ယင်းကို manual နဲ့ automatic နည်းလမ်းများ၏ output ANOVA အတူတွဲထားသောအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံကိုအသုံးပြုပြီးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် t ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားမှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့စမ်းသပ်မှု။ 4.62, ဆိုလိုပါ (ကို manual ထက်; တိုင်းတာခြင်းအမျိုးအစားများအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် automated ခန့်မှန်းချက် (SE, 0.06, 4.41 ဆိုလို); ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူရှိခဲ့သည် SE, 0.04; F(1,684) = 8.8, p = 0.02) ။ တိုင်းတာခြင်းများနှင့်ဒေသအမျိုးအစားတစ်ခုသိသာအပြန်အလှန် (ရှိခဲ့သည်F(35,684) = 2.59, p <0.001) နောက်ထပ်စူးစမ်းခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒေသ ၃၆ ခုမှ ၃၀ တွင်လက်စွဲနှင့်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုတို့အကြားသိသာသောကွာခြားချက်မရှိပါ။ precentral gyrus နှင့်ဘယ်ဘက် postcentral gyrus နှင့်အလယ်ပိုင်း front gyrus၊ gyrus rectus နှင့် cuneus တို့တွင်နှစ်မျိုးနှစ်စားမှတ်သားထားသည်။ left hemisphere ။ အထူးသဖြင့်ဤဒေသများထဲမှတစ်ခုသာဤလေ့လာမှုအတွက် (အထူးသဖြင့်ဘယ်ဘက် gyrus rectus) စိတ်ဝင်စားမှုရှိသောဒေသတစ်ခုတွင်ရှိသည်။ အသက်နှင့်အလိုအလျောက်တွက်ချက်မှုနှင့်လက်ငင်းခန့်မှန်းချက်များအကြားဆက်စပ်မှုမရှိပါ။r = 0.02, p = 0.53) ။ ထို့ကြောင့်နှစ်ခုမက်ထရစ်အကြားခြားနားချက်များမဆိုသိသာအသက်အရွယ် related ဘက်လိုက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းမျှသက်သေအထောက်အထားရှိ၏။
အဲဒါကိုတိုင်းတာများအကြားလူတစ်ဦး, ပျောက်ဆုံးဒေတာနှင့်မမှန်ကြားကာလနှုန်းမျိုးစုံတိုင်းတာ၏ပါဝင်ခွင့်ပြုထားအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီ cortical အမှတ်မှာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာဆုံးဖြတ်ရန်, ရောထွေးမော်ဒယ်ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် (စာရင်းအင်းပါဝါတိုးရွေးကောက်တော်မူခဲ့သည်မစ္စတာပင်ဟဲရိုးနှင့်ဘိတ်, 2000) ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြားတဲ့ခြေလှမ်း-Down မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်: တစ်ဦးချင်းစီ cortical အမှတ်မှာကြှနျုပျတို့ကုဗ quadratic နှင့် linear အသက်အရွယ်သက်ရောက်မှုများအတွက်စမ်းသပ်တစ်ဦးရောနှောဆိုးကျိုးများ polynomial ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်သုံးပြီး cortical ထူလုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုဗအသက်အရွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာသိသိသာသာမကြီးဘူးဆိုရင် p <0.05, ဒါကြောင့်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်ကျနော်တို့ဒါ quadratic မော်ဒယ်ဆင်းသွားလေ၏။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် cortical point တစ်ခုစီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကုဗ၊ quadratic သို့မဟုတ် linear function ကိုအကောင်းဆုံးရှင်းပြခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုဗမော်ဒယ်များကို quadratic ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးကြောင်း၊ အစဉ်အလာအား linear models ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်ဟုယူဆသည် တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကျပန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုစီသည်မိသားစုတစ်ခုစီအတွက်ကျပန်းသက်ရောက်မှုတစ်ခုအတွင်း၌ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ရာအတွင်းလူနှင့်မိသားစုအတွင်းမှီခိုမှုနှစ်ခုစလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် cubical model ရှိသော cortical points အတွက် k၏ကြိမ်မြောက် cortical ထူ iထဲမှာကြိမ်မြောက်တစ်ဦးချင်းစီ jကြိမ်မြောက်မိသားစုထူအဖြစ်လုပ်ပါတယ်ခဲ့သည်ijk = ကြားဖြတ် + dij + β1(အသက်) + β2 * (အသက်အရွယ်) **2+ β3 * (အသက်အရွယ်) **3+ eijkအဘယ်မှာရှိသနည်း dij အတွင်း-လူတစ်ဦးကိုကျပန်းသက်ရောက်မှုမော်ဒယ်အသိုက်နေကြသည်နှင့်မိသားစုမှီခိုအတွင်းအဆိုပါကြားဖြတ်နှင့်βအသုံးအနှုန်းများသက်ရောက်မှု fixed နေကြပြီး, eijk အဆိုပါကျန်နေတဲ့အမှားကိုယ်စားပြုတယ်။ quadratic မော်ဒယ်များကတော့ကုဗနှင့် quadratic အသက်အရွယ်အသုံးအနှုန်းများဟာကုဗအသက်အရွယ်သက်တမ်းမရှိကြနှင့်, linear မော်ဒယ်များ။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှု covariates အဖြစ် SES နှင့်အိုင်ကျူဝင်ရောက်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့ကြသည်။
အထွတ်အထိပ် cortical ထူမှီခဲ့သောမှာအသက်အရွယ်ဟာတပ်ဆင်ခါးဆစ်၏ပထမဦးဆုံးမိန့်အနကျအဓိပ်ပါယျထံမှကုဗနှင့် quadratic မော်ဒယ်များဘို့တွက်ချက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တိုကျရိုကျ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယာယီ, parietal နှင့် occipital isocortex အများစုတစ်လျှောက်လုံးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာကနဦးကလေးဘဝတိုးတဲ့ကာလနှင့်အတူ, ကုဗဖြစ်ကြသည်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကျဆင်းသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ပြီးတော့လူကြီးအတွက် cortical အထူ၏တည်ငြိမ် (သဖန်းသီး။ 2) ။ တိုးနှင့်ကျဆင်းခြင်း, ဒါပေမယ့်အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်းတည်ငြိမ်များ၏အဆင့်ချို့တဲ့ (က quadratic မော်ဒယ်) ကသွင်ပြင်လက္ခဏာတိုးတက်မှုနှုန်း insula နှင့် anterior cingulate cortex တာအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက linear လမ်းကြောင်းဟာ posterior orbitofrontal နှင့်တိုကျရိုကျ operculum, အ Piriform cortex ၏ဝေမျှသည် medial ယာယီ cortex, subgenual cingulate ဒေသများရှိမြင်ခြင်းနှင့် occipitotemporal cortex medial ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး, ကုဗ quadratic သို့မဟုတ် linear ဒုံးကျည်သွားလမ်းနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်ဒေသများထံမှတစ်ဦးချင်းဒေတာမှတ်ပုံဂရပ်များအတွက်ပြသထားပါသည် ပုံ 3.
အဆိုပါနှောက် cortex တစ်လျှောက်လုံးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာ၏ရှုပ်ထွေး။ ဦးနှောက်မြေပုံဒေါင်လိုက်တစ်ဦး (အနီ) ကုဗ, quadratic (အစိမ်းရောင်) သို့မဟုတ် linear (အပြာ) ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းရှိခြင်းကိုပြသ။ အဆိုပါဂရပ်များသည်ဤသင်းဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီအတှကျတိုးတကျမှုပုံစံကိုပြသ။ နိုင်ရန်အတွက် dorsal, လက်ျာဘက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်, လက်ဝဲ medial, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် left နှင့်ညာဘက် medial အမြင်များရှိနေပါသည်။ အဆိုပါ Corpus callosum မည်းနေသည်။
ပန်းရောင်အတွက် superimposed အဆိုပါတပ်ဆင်လမ်းကြောင်းအတူအပြာအတွက်ကုန်ကြမ်း cortical ထူ data တွေကိုဖေါ်ပြခြင်းဂရပ်များ။ တစ်ဦး-c ကိုတစ်ကုဗလမ်းကြောင်းရှိသောသာလွန်တိုကျရိုကျ gyri, (: ပထမဦးဆုံးအသုံးပုံရိပ်တွေနိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်ဒေသများများအတွက်ယုတ် cortical အထူနှင့်ဒုံးကျည်သွားလမ်းကိုပြသa); အစိမ်းရောင်တွင်တွေ့မြင်တစ်ဦး quadratic လမ်းကြောင်းရှိပြီးသော insula ၏အဘို့, ပုံ5(b); အတွက်အပြာတွင်တွေ့မြင်တစ်ဦး linear လမ်းကြောင်းရှိပြီးသော orbitofrontal cortex ၏အဘို့, ပုံ4(c).
ကျနော်တို့ (cytoarchitectonic လယ်ကွင်း assign လုပ်ဖို့ histological atlases အသုံးပြု. မတူညီသော cytoarchitecturonic အမျိုးအစားများ cortical ဒေသများမှလေးစားမှုနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာ၏ရှုပ်ထွေးလေ့လာOngur et al ။ , 2003) ။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ cortex နဲ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပုံစံ၏အခြေခံ types များအကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အပြိုင်ထင်ရှား။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex (cortical အမျိုးအစားများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲအကြားစာပေးစာယူအဖမ်းခံရသောလူအရေအတွက်သဖန်းသီး။ 4) ။ ဤဒေသ၏အများဆုံး anterior အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့တစ်ကုဗလမ်းကြောင်းဟာတိုကျရိုကျတိုင်နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် orbitofrontal တိုင်းဒေသကြီးများ၏ homotypical (ခြောက်အလွှာ) isocortex ရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, posterior Orbital မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ cortex အများစုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ quadratic နှင့် linear တိုးတက်မှုနှုန်းဘယ်နေရာတွေမှာလဲအောက်ပါအတိုင်း။ ဤဒေသသငြ်ကူးေူပာင်းမြ cortex ၏ပုံမှန်တစ်အလွှာပြုလုပ်ခြင်းပုံစံရှိပြီး: homotypical isocortex နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနည်းပါးလာနည်းကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးအလွှာရှိပြီးအလွှာ4၏ nonpyramidal ဆဲလ်များ၏ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာရုံစူးစိုက်မှု, အတွင်းပိုင်း granular အလွှာ (ကင်းမဲ့Brockhaus, 1940; Mesulam နှင့် Mufson, 1982; Ongur et al ။ , 2003) ။ ဤဒေသ၏အများဆုံး posterior အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ linear နှင့် quadratic တိုးတက်မှုနှုန်း Piriform cortex, olfaction subserves တဲ့စရိုက် allocortical ဧရိယာရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့။
Aအဆိုပါ orbitofrontal cortex တစ်လျှောက်လုံးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာ၏ရှုပ်ထွေးသော, တစ်ဦးစံဦးနှောက် template ကိုပေါ်သို့ projected ။ အဆိုပါ anterior နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် orbitofrontal cortex တစ်ကုဗမထိုက်မတန် (အနီ) ရှိပါတယ်; medial နှင့် posterior orbitofrontal cortex ရိုးရှင်းတဲ့ quadratic (အစိမ်းရောင်) နှင့် linear (အပြာ) ဘယ်နေရာတွေမှာလဲရှိပါတယ်။ B, လမ်းကြောင်းအားဖြင့်ဒေသ၏ cytoarchitectonic မြေပုံပေါ်တွင် superimposed ကြသည် Öngür et al ။ (2003) အဆိုပါ cytoarchitectonic လယ်ကွင်းများနှင့်ဘယ်နေရာတွေမှာအတွက်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအကြားထပ်တူသရုပျဖျောဖို့။ C, သင်းဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီ၏လမ်းကြောင်း။
ပေမဲ့ ပုံ4isocortex ထံမှရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံများကိုတစ်ဦးအကူးအပြောင်းဖြစ်ပေါ်ဘယ်မှာတူညီတဲ့အခြေခံမူ, ယေဘုယျအားဖြင့်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်, ထို orbitofrontal cortex အာရုံစိုက်။ အဆိုပါ medial တိုကျရိုကျ cortex များအတွက်ရလဒ် (dysgranular သို့မဟုတ် agranular ဗိသုကာများ၏ဒေသများတွင်ပိုမို posteriorly အထူးသဖြင့်အဆိုပါ medial တိုကျရိုကျ pole- နှင့် linear ၏ homotypical cortex သို့မဟုတ် quadratic ဘယ်နေရာတွေမှာအတွက် anteriorly ကုဗတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်တကွ, orbitofrontal cortex အတွက်သူတို့အားဆင်တူသဖန်းသီး။ 5ထိပ်တန်း) ။ (ထို insula များအတွက်သဖန်းသီး။ 5, အောက်ခြေ), ပုံစံအများကြီးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏ agranular နှင့်ညံ့ဖျင်းလမိုင်း cortex အတူ anterior insula, တစ်ဦး linear ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဒုံးကျည်သွားလမ်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ dysgranular နှင့် homotypical insula မှ posteriorly Moving, ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေး quadratic မထိုက်မတန်မှာရှိ၏ အဆိုပါ cortex ပို. ပို. homotypical ဖြစ်လာအဖြစ်နေဆဲပိုပြီး posteriorly သည်, လမ်းကြောင်းကုဗဖြစ်လာသည်။ ထိုနည်းတူစွာယင်းယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, အထိုသို့သော Piriform cortex အဖြစ် allocortical အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအများစုနေထိုင်ပြီးတစ်ဦး linear လမ်းကြောင်းပြသထားတယ်။ ဆနျ့ကငျြဘမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယာယီ isocortex ထိုကဲ့သို့သော entorhinal နှင့် perirhinal ဒေသများအဖြစ်ကုဗဒုံးကျည်သွားလမ်းနှင့်အကူးအပြောင်းဒေသများ (quadratic နှင့် linear ဘယ်နေရာတွေမှာလဲရှိထားပါတယ်သဖန်းသီး။ 2) ။ ဤရလဒ်သည်အတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် စားပွဲတင် 1။ မည်သို့ပင်ဆိုစေအသီးသီးတစ်ဦး linear နှင့် quadratic လမ်းကြောင်းရှိသည် isocortical ဒေသများဖြစ်ကြသည်နှစ်ဦးစလုံးအရာအချို့ကို cortical cortical အမျိုးအစားများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲအကြားကဒီ link ကိုကိုင်မထားဘူးရှိရာဒေသများတွင်အများစုအထူးသ medial occipitotemporal နှင့် anterior သာလွန်ယာယီဒေသများရှိပါတယ်။ SES နှင့်အိုင်ကျူဖြစ်စေသီးခြားစီသို့မဟုတ်အတူတကွ, covariates အဖြစ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြသည့်အခါကျင်းပရလဒ်များ၏ပုံစံ။
isocortical ဒေသများတစ်ကုဗလမ်းကြောင်းရှိသည်, ်ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာဒေသများတစ် quadratic လမ်းကြောင်း (ဥပမာ, အ cingulate gyrus အတွက်ဧရိယာ 24a ၏ agranular နှင့်ညံ့ဖျင်းလမိုင်း cortex) သို့မဟုတ်တစ် linear ကျဆင်းမှုဖြစ်စေရှိသည်ဘယ်မှာညာဘက် medial prefrontal cortex အတွက်ဘယ်နေရာတွေမှာ၏ထိပ်, အသေးစိတ်အမြင်များ အထူအတွက် (ဥပမာ, အ gyrus rectus ၏ပါးလွှာနှင့်အကြီးအကျယ် agranular cortex) ။ ညာဘက် insula ရွေ့လျားတဖြည်းဖြည်းပိုမိုရှုပ်ထွေးဘယ်နေရာတွေမှာလဲပြသထားတယ်အောက်ခြေ: အဆိုပါ posterior သောအဘို့ကိုတစ်ကုဗလမ်းကြောင်း (အနီ) ရှိပါတယ်, အ insula ၏ကိုယ်ကိုတစ်ဦး quadratic မထိုက်မတန် (အစိမ်းရောင်) ရှိပြီးအဆိုပါ anterior insula တစ် linear မထိုက်မတန် (အပြာ) ရှိပါတယ်။ အလားတူပုံစံလက်ဝဲ insula များအတွက်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်နေရာတွေမှာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမိန့်သက်ဆိုင်ရာ cortical ဒေသများနှင့်နောက်ခံ cortical အမျိုးအစားနှင့်အတူပေးထားကြသည်
ကျနော်တို့လာမယ့်အထွတ်အထိပ် cortical အထူတစ်ဦးချင်းစီပွိုင့်များအတွက်တပ်ဆင်ကွေး၏ပထမဦးဆုံးမိန့်ဆင်းသက်လာ အသုံးပြု. ဖြစ်စေတစ်ကုဗသို့မဟုတ် quadratic ဒုံးကျည်သွားလမ်းနှင့်အတူအားလုံးမှတ်မှီခဲ့သောမှာအသက်အရွယ်ဆုံးဖြတ်သည်။ တစ်ဦးကအမြင့်ဆုံးအသက်အရွယ်တစ် linear ဒုံးကျည်သွားလမ်းနှင့်အတူရမှတ်ဘို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မရနိုင်ပါ။ ရလဒ်မှာရရှိနိုင်မယ့်အချိန်-ချုံးပြောင်းလဲနေသော sequence ကို (ဖြည့်စွက်, Movies 1,2အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည် www.jneurosci.org ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်) ကိုရုပ်ရှင်ကနေယူ, "တစျခုခု" (သဖန်းသီး။ 6), နှင့် 56 ဦးနှောက်ဒေသများအတွက်အထွတ်အထိပ် cortical အထူ၏ခန့်မှန်းခြေအသက် (ထို Animation segment tool ကိုအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်ကဲ့သို့) ။
အဆိုပါနှောက် cortex ဖြတ်ပြီးအထွတ်အထိပ် cortical အထူပညာရေးခေတ်။ peak အထူသာကုဗသို့မဟုတ် quadratic ဒုံးကျည်သွားလမ်းနှင့်မရ (ကမဲမှောင်အနီရောင်အရိပ်နှင့်အတူညွှန်ပြထားတဲ့) linear ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူဒေသများများအတွက်ဒေသများအဘို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအပြောင်းအလဲများမှာရှိနိုင်ပါဖြည့်စွက်, Movies 1 နှင့်2အတွက်သည် dynamically ရုပ်ပြနေကြတယ် www.jneurosci.org ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်။
ရလဒ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ရန်, isocortex အတွင်းမူလတန်းအာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာဒေသများယေဘုယျအားဖြင့်ကပ်လျက်အလယ်တန်းဒေသများရှေ့၌၎င်း, အခြား polymodal အသင်းအဖွဲ့ဒေသများမတိုင်မီ၎င်းတို့၏အထွတ်အထိပ် cortical ထူမှီ။ အဆိုပါ posterior ဦးနှောက်အတွက်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအထူရောက်ရန်ပထမဦးဆုံးဧရိယာဟာ striate မူလတန်းအမြင်အာရုံဧရိယာ၏အများကြီးပါဝင်တဲ့, အ occipital ထမ်းဘိုးတို့ကိုနောကျ somatic အာရုံခံ cortex (~7 နှစ်) သည် (လက်ဝဲဘက် ~7 နှစ်နှင့် ~8 နှစ်ပေါင်း ) ညာဘက်) နှင့်ထို့နောက်ကျန်ရှိနေသေးသော parieto-occipital cortex, ထိုကဲ့သို့သော posterior parietal cortex အဖြစ် polymodal ဒေသများ () (~9-10 နှစ်ကြာပြီးနောက်အထွတ်အထိပ်ထူရောက်ရှိအတူ။ အဆိုပါတိုကျရိုကျ cortex များတွင်မူလတန်းမော်တာ cortex ဟာဖြည့်စွက်မော်တာဒေသများ (~9 နှစ်) အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့်တိုကျရိုကျတိုင် (~10 နှစ်) ၏အများဆုံး, (~10 နှစ်) အတော်လေးအစောပိုင်းအထွတ်အထိပ် cortical ထူပန်းတိုင်လမ်းဆုံးကိုရောက်ခဲ့။ ထိုကဲ့သို့သော dorsolateral prefrontal cortex နဲ့ cingulate cortex အဖြစ် high-အလို့ငှာ cortical ဒေသများ, နောက်ဆုံး (~10.5 နှစ်) အထွတ်အထိပ်ထူရောက်ရှိဖို့။ အဆိုပါ medial အမြင်များမှာ occipital နှင့်တိုကျရိုကျထမ်းဘိုးတို့ကိုအစောပိုင်းအထွတ်အထိပ်ထူမှီ, ပြီးတော့တစ်ဦး centripetal လှိုင်းပု medial prefrontal နှင့် cingulate cortex နောက်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ထူမရရှိစနှင့်အတူဤဒေသများကနေချင်းနှင်း။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ventral တိုးတက်မှုတစ်ခုသိသိသာသာ dorsal လည်းရှိပါသည်။ အသီးအသီးကဦးနှောက်ဒေသများအဘို့အသေးစိတ်ရလဒ်များကိုပေးစား စားပွဲတင် 2.
အထွတ်အထိပ် cortical အထူ၏ခန့်မှန်းခြေအသက် 56 ဦးနှောက်ဒေသများဘို့ပေးတော်မူသည်ကို
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာနှင့်အတူ cortical အမျိုးအစားများ alignment
ဒီလေ့လာမှုကထိုအဂန္မြေပုံတစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုကြှမျးကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာရိုးရာ cytoarchitectonic မြေပုံတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်အဆိုပါ cortical types များအကြားတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာ alignment ကိုပြသသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးကိုအထောက်အကူများနှင့်ယခင်အလုပ်ကိုတိုးချဲ့ (Gogtay et al ။ , 2004; Sowell et al ။ , 2004; O'Donnell et al ။ , 2005) အသက်ပိုမိုမြင့်မားစေရန်အတွက်သက်ရောက်မှု၏ထောက်လှမ်းခွင့်ပြုခဲ့သောအများကြီးပိုကြီးတဲ့နမူနာအရွယ်အစားများ၏ပါဝင်မှုမှတဆင့်။
ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အခြား longitudinal လေ့လာမှုများပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်အချို့ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ allocortex ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်သတင်းပို့ရိုးရှင်းသော linear ကြီးထွားမှု, ပု Piriform ဧရိယာသည်လည်း (ထို hippocampus ဘို့ယခင်ကတွေ့ရှိရထားသည်Gogtay et al ။ , 2006) ။ ကျနော်တို့လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတိုက်ရိုက် hippocampus တိုင်းတာရန်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် Gogtay နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက allocortical hippocampus ၏အသံအတိုးအကျယ်ပြောင်းလဲမှု၏လမ်းကြောင်း linear ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် isocortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြား cortical ဝိသေသလက္ခဏာများဤကွဲပြားခြားနားသောအစီအမံများဖြည့်စွတ်သဘောသဘာဝသရုပ်ပြထိုကဲ့သို့သောမီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆကဲ့သို့သောအခြား cortical morphometric အစီအမံ, ( အသုံးပြု. လေ့လာမှုများအတွက်အတည်ပြုGogtay et al ။ , 2004; Sowell et al ။ , 2004).
ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့မော်ဒယ်ကိုသာအသက်အပိုင်းအခြားဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့် extrapolated မရနိုင်သက်ဆိုင်သည်။ အဆိုပါကုဗလမ်းကြောင်းဟာအသက်အပိုင်းအခြားထက် ကျော်လွန်. တိုးချဲ့ခဲ့သည်ဆိုပါကဥပမာ, ကမဇီဝယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်မဟုတ်သလိုဒီအသက်အပိုင်းအခြားအတွက်လက်ရှိဒေတာများကထောက်ခံဖြစ်သောလူကြီးအတွက် cortical အထူတစ်ခုတိုး (~25 များ၏အသက်အရွယ်န်းကျင်မှ စတင်. ), ရှိဆိုလိုပေသည် (Sowell et al ။ , 2007) ။ ယင်းအစား cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်မှတ်တိုင်များ၏အဆင့် (ကကုဗကွေးအတွက်တစ်ခုနဲ့ပက်ပင်း၏ဒုတိယအချက်) လူကြီးများ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တည်ငြိမ် cortical အတိုင်းအတာသို့အကူးအပြောင်း၏ရမှတ်အဖြစ်ပိုကောင်း Conceptual ဖြစ်သောမှာအသက်အရွယ်။ ကုဗဘယ်နေရာတွေမှာနှင့်အတူဒေသများပိုမိုမြန်ဆန် quadratic ခါးဆစ်နှင့်အတူတွေထက်ဒီတစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းအမှတ်သို့ရောက်ရှိ, ဤသဘောပိုမြန်ကြီးထွားရှိခြင်းအဖြစ် conceptualized နိုငျသညျ။
ဒါဟာရလဒ်များကိုမှပံ့ပိုးအတိုင်းအတာများရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒီအပျေါပေါကျနိုငျသညျ, ဥပမာအားဖြင့်အလိုအလျောက် technique ကို၏အခြေခံဖြစ်သော cortical မျက်နှာပြင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး, သည်အတိုင်း, allocortex နှင့််ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာ cortex ၏ဒေသများတွင်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲဖြစ်စေခြင်းငှါ, တိုင်းတာခြင်းအမှားထဲမှာရရှိလာတဲ့တိုးရှုပ်ထွေးသော (ကုဗ) တိုးတက်မှုနှုန်းပုံစံများဖုံးကွယ်စေခြင်းငှါ, ။ အများအပြားအချက်များကဤမဖြစ်နိုင်စေ။ လက်စွဲခန့်မှန်းဆန့်ကျင်စစ်ကြောစီရင်သည့် cortical အထူကိုတိုင်းတာ၏တရားဝင်မှု cortex အမျိုးအစားနှင့်အတူစနစ်တကျကွဲပြားကြဘူး။ အဆိုပါ orbitofrontal ၏ allocortical ဒေသများနှင့် medial cortex အတွက် automated cortical အထူခန့်မှန်းချက် isocortical ဒေသများ၏တိုင်းတာအဖြစ်တရားဝင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါကျနော်တို့ကိုအသုံးပြု algorithm ကိုနှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျကိုလည်းတိကျစွာ (a "ကို Phantom" ဦးနှောက်၏ cortical မျက်နှာပြင် extract အဆိုပါ cortex ၏ simulated စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်ရှာဖွေပြီးရောဂါတိုးတက်မှု၏ neuropathologically ထူထောင်ပုံစံများကိုဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်Macdonald et al ။ , 2000; Lerch နှင့်အီဗန်, 2005; Lerch et al ။ , 2005; Lee က et al ။ , 2006) ။ ၎င်း၏ကြီးမားသောနမူနာအရွယ်အစားနှင့်အလားအလာအချက်အလက်များ၏မြင့်မားတဲ့အချိုးအစားကနေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအကြိုးခံစားခှငျ့, linear နှင့်ကစာရင်းအင်းနှစ်ဦးစလုံးတို့, ငါတို့သိသာ, ဇီဝငြင်းခုန်ရာ cortical တိုးတက်မှုနှုန်းအပေါ်အသက် curvilinear သက်ရောက်မှု၏ထောက်လှမ်းရရှိသည့်အချက်များ။
လူသားတွေအတွက် cortical ပြောင်းလဲမှုကိုကျောထောက်နောက်ခံဆယ်လူလာဖြစ်ရပ်များ၏သဘောသဘာဝကိုထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ထိုကဲ့သို့သော subplate ပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ resolution အဖြစ် cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစောဆုံးရှုထောင့်, အချို့သည် neuroblasts သူတို့ရဲ့ရင့်ကျက် laminar တည်နေရာ (ရန် neuroepithelium ကနေပြောင်းရွှေ့အဖြစ်Kostovic နှင့် Rakic, 1990; Kostovic et al ။ , 2002) ဦးနှောက်အလွှာပြုလုပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ရန် သန္ဓေသားဘအတွက် နှင့် perinatally, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုလေ့လာအသက်ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကျလိမ့်မည်။ nonhuman တိရိစ္ဆာန်လေ့လာစရာများ (သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါကာလအတွင်းမှာ cortical အတိုင်းအတာ dendritic ကျောရိုးနှင့် axon ပြုပြင်နှင့်အတူ cortical ကော်လံ၏ဗိသုကာများ၏အတွေ့အကြုံကို-မှီခိုတန်ဆာကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုChklovskii et al ။ , 2004; Mataga et al ။ , 2004; Hensch, 2005; sur နှင့် Rubenstein, 2005) ။ ထိုသို့သော morphological ဖြစ်ရပ်များဖြစ်စေတစ်ကုဗသို့မဟုတ် quadratic ဒုံးကျည်သွားလမ်းနှင့်အတူဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်ရသော cortical ထူအတွက်တိုး၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအဆင့်မှအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်ထားတဲ့ cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်များ၏အဆင့် (synapses ၏အသုံးပြုမှုကို-မှီခိုရွေးချယ်ဖျက်သိမ်းရေးကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ,Huttenlocher နှင့် Dabholkar, 1997) အဲဒီ supporting သိမြင်မှုစွမ်းရည်အပါအဝင်အာရုံကြောဆားကစ်, (မွမ်းမံနိုင်Hensch, 2004; Knudsen, 2004) ။ ထိုကဲ့သို့သောကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အရံ cortical neuropil သို့ myelin ၏ပြန့်ပွားကဲ့သို့ဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအကြား Interface ကိုမှာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ရပ်များ, သည်လည်း (cortical အထူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါYakovlev နှင့် Lecours, 1967; Sowell et al ။ , 2004).
ဖြစ်နိုင်သမျှဆယ်လူလာဖြစ်ရပ်များ၏ဤအကောင့် cortical ဗိသုကာ၏တ ဦး တည်းဆုံးဖွတျအဖြစ်အတွေ့အကြုံ၏အခန်းကဏ္emphasကိုအလေးပေးဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အကဲဖြတ်မှုသည်ကလေးသူငယ်၏လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေနှင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိခဲ့ပြီးရလဒ်ကိုပုံစံမပြောင်းလဲသဖြင့်ဤအတိုင်းအတာကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားအဓိကအချက်များ၊ အထူးသဖြင့်မိသားစုနှင့်ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်၏ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။ တစ် ဦး ချင်းခြားနားဥာဏ်ရည်ရှိခြားနားမှုသည် cortical အထူနှင့်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလွှမ်းမိုးသည်။ဇာတ်ကြောင်း et al ။ , 2006; Shaw et al ။ , 2006b) ။ အိုင်ကျူထောက်လှမ်းရေးထိုကဲ့သို့သောအလျင်နဲ့အထွတ်အထိပ် cortical ထူမရရှိစများ၏အသက်အရွယ်အဖြစ် cortical တိုးတက်မှုနှုန်းဘယ်နေရာတွေမှာလဲ, အချို့ဂုဏ်သတ္တိများကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပေမယ့်, ကရှုပ်ထွေးအကြားအခြေခံ link ကို impact တော်မမူကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်တစ် covariate အဖြစ်ထဲသို့ဝင်သောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျနော်တို့ရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေ့ရှိချက်ကျင်းပ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း၏ cytoarchitecture နှင့်ရှုပ်ထွေး။
မျိုးရိုးဗီဇအချက်များ (cortical ဗိသုကာအဆုံးအဖြတ်လည်းအရေးကြီးပါသည်Thompson က et al ။ , 2001; Lenroot et al ။ , 2007) ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် common polymorphic catechol-O-methyltransferase Val158Met polymorphic G-ပရိုတိန်းအချက်ပြ4ဗီဇ၏စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက်တစ်ခုတည်းဘေ့ polymorphic နှင့်, serotonin Transporter ဗီဇတစ်ခုကမကထဒေသ polymorphic (5-HTTLPR) အားလုံး cortical အသံအတိုးအကျယ်, အထူသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးအပေါ်အချို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဖို့တွေ့ပါပြီ (ဘရောင်းနှင့် Hariri, 2006; Meyer-Lindenberg et al ။ , 2006; Zinkstok et al ။ , 2006; Buckholtz et al ။ , 2007; တေလာ et al ။ , 2007) ။ အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွားနှစ်ခုလုံးကို cortical တိုးတက်မှုနှင့်ရှုပ်ထွေးနှစ်ဦးစလုံးမှအထောက်အကူများနှင့်အထူးသဖြင့်ခေတ်သစ်လူသားဦးဆောင်နွယ်ထဲမှာမျောက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်အပြုသဘောရွေးချယ်ရေးအောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းဗီဇ (များမှာGilbert et al ။ , 2005) ။ ဤပါဝင်သည် ASPM (ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဗိုင်းလိပ်တံ-ကဲ့သို့ microcephaly ဆက်စပ်) နှင့် MCPH1 (microcephaly, စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမူလတန်း autosomal) မျိုးဗီဇ (အီဗန် et al ။ , 2004a,b) ။ ထိုသို့သောမျိုးဗီဇ၏ဒေသဆိုင်ရာ cortical စကားရပ်ထဲမှာအပြောင်းအလဲ cortical အမျိုးအစားများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းမြေပုံနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူ aligns ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်။
ဤအဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံစံများနှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးဖို့သူတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်သောဆက်ဆံရေးအသေးစိတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအနာဂတ်အလုပျအတှကျဖြစ်နေဆဲပေမယ့်အနည်းငယ်အချက်များကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, posterior medial orbitofrontal ဒေသများအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ limbic စနစ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီ, သူတို့ကတစ်ဦး linear ဒုံးကျည်သွားလမ်းကိုပြသ။ ဤဒေသများ (အထူးသဖြင့်ပြစ်ဒဏ်သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်, အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ရလဒ်များစောင့်ကြည့်ဖို့စဉ်းစားနေကြRolls, 2004; Kennerley et al ။ , 2006), သူတို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာဖှံ့ဖွိုးတိုးခံယူဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာအခြေခံသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာ။ ဆနျ့ကငျြ, isocortical ဒေသများတွင်မကြာခဏဝေဖန်ကာလအတွင်းမှာလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ gradients ကိုပြသပေးသောပိုမိုရှုပ်ထွေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ functions များ, ထောက်ခံပါတယ်။ ကျနော်တို့သာလူ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရေးပါကာလ, ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲအကြားတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ထင်ကြေးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal cortex အတွက် cortical အထူတစ်ခုတိုးလာနဲ့အတူတိုက်ဆိုင်သည့်အသက်အရွယ်ကာလ, လူ့စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါကာလ၏ delineation ရှုပ်ထွေးဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့နှောင်းပိုင်းကငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှတ်ဉာဏ်နှင့်သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလုပ်လုပ်ကိုင်, စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး၏အလုပ်အမှုဆောင်ကျွမ်းကျင်မှုအထူးသဖြင့်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကာလဖြစ်ပါသည် (Chelune နှင့် Baer, ​​1986; စိန်, 2002; Huizinga et al ။ , 2006; Jacobs et al ။ , 2007) ။ ဆနျ့ကငျြ, (ထိုကဲ့သို့သောစာတစ်စောင်တွေလိုပဲနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထောက်လှမ်းကဲ့သို့) အချို့သောအမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက်အရေးပါကာလ (6 သို့မဟုတ်7~age) အလယ်တန်းကလေးဘဝအတွက်အဆုံးသတ်အဖြစ်ခန့်မှန်းထားပြီး (Lewis ကနှင့်မစ္စတာ Maurer, 2005) နှင့်, ထိုနည်းတူ, ထိုအမြင် cortex အတွက် cortical ထူအတွက်တိုး၏ကာလသည်လည်းဤအချိန် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အသက်အရွယ် 7-8) ဝန်းကျင်အဆုံးသတ်ထားသည်။ cortical ထူအတွက်တိုး၏အဆင့်နှင့်အတူအချို့သောအရေးကြီးသောကာလကြာချိန်အကြားဤသည်မှာဆက်စပ်မှုဆက်ဆက်တစ်လောကလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ အခြို့သောအာရုံခံစနစ်များအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင့်သေချာပေါက်စီတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားယာယီပြတင်းပေါက်ရှိခြင်း, မျိုးစုံအရေးပါကာလနှင့်အတူ (ဆင်တူ cortical ဒေသများကထောက်ခံ) စနစ်များ၏တည်ရှိမှုအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ (Harrison et al ။ , 2005; လေဝိ, 2005; Lewis ကနှင့်မစ္စတာ Maurer, 2005) ။ ဒါကဆွေးနွေးမှု (အရေးပါတဲ့ကာလအပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့် cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအဆင့်စဉ်အတွင်းအများအပြားသိမြင်ကျွမ်းကျင်မှုဆက်လက်သနျ့၏အရေးကြီးသောထှကျသှားစပွေီးအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားမဖြစ်သင့်Luna et al ။ , 2004; Luciana et al ။ , 2005).
ဒီနေရာမှာအစီရင်ခံတွေ့ရှိချက်၎င်း၏အမာခံမှာ isocortex (ကကုဗလမ်းကြောင်းရှိခြင်း) နှင့်တကွ, အစွန်အဖျားမှာ (အများစုနေထိုင်ပြီး linear တိုးတက်မှုနှုန်းဖေါ်ပြခြင်း) ကို allocortex အဆိုပါနှောက် cortex ၏အဖှဲ့အစညျးအာရုံစူးစိုက်မှုအကွင်းတစ်စီးရီး၏စည်းကမ်းချက်များ၌နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါသောစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ အကြား၌ (quadratic နှင့် linear ဘယ်နေရာတွေမှာလဲတစ်ရောနှောရှိခြင်း), နှင့်သငြ်ကူးေူပာင်းမြဒေသများ။ ဒီ model အတွက် isocortex ဒီအသိထဲမှာနှောက် cortex ၏အဓိကမှာတည်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်အီဗိုလူးရှင်းအတွက် Piriform ဧရိယာ (နှစ်ဦးနှစ်ဖက် allocortex) နှင့် hippocampus (medial allocortex), နှင့်နောက်ထပ်အသေးစား allocortical ဒေသများထက်ပေါ်ပေါက်မသာ။ ထို့ကြောင့်မှတဆင့် Vivo အတွက် neuroanatomic ပုံရိပ်ကျနော်တို့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှောက် cortex ၏ cytoarchitecture နှင့်သမိုင်းနှစ်ဦးစလုံးကိုထင်ဟပ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
နိုဝင်ဘာလ 30, 2007 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2008 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2008 ။
ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ၏ Intramural သုတေသနအစီအစဉ်ကထောက်ခံခဲ့သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ထိုလေ့လာမှုမှာပါဝင်သူနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စာပေးစာယူဖိလိပ္ပုကို Shaw, ကလေးသူငယ်စိတ်ရောဂါကုသမှုဘဏ်ခွဲ, ROOM တွင် 3N202, အဆောက်အအုံ 10, Center က Drive ကို, စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျု, Bethesda, MD 20892 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အာရုံကြောသိပ္ပံ 2008-0270 / 6474 / 08-283586 $ 09 / 15.00 များအတွက်မူပိုင်ခွင့်©0Society က
Allman J ကို,
Watson K သည်
(2002) လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာနှစ်ဦး phylogenetic Special ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် 8: 335-346 ။
Brockhaus H ကို
(1940) cyto-und myleoarchitcktonik des crotex clastralis und des clastrum beim menschen Die ။ J ကို Psychol Neurol 49: 249-348 ။
(2006) serotonin ဗီဇ polymorphic ၏လေ့လာမှုများ Neuroimaging: အမျိုးဗီဇ၏ဆက်စပ်မှုတွေ, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူရှာဖွေစူးစမ်း။ Cogn ပြုမူနေ neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု 6: 44-52 ။
Pezawas L ကို,
Vakkalanka R ကို,
Kolachana B က,
Sust S က,
RGS2007 သက်ရောက်မှုအတွက် (4) Allelic အပြောင်းအလဲလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှု။ J ကို neuroscience 27: 1584-1593 ။
အဆိုပါ Wisconsin ပြည်နယ်ကတ် Sorting စမ်းသပ်မှုများအတွက် (1986) Developmental စံချိန်စံညွှန်း။ J ကို Clin Exp Neuropsychol 8: 219-228 ။
Svoboda K သည်
(2004) cortical rewiring နှင့်သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်မှု။ သဘာဝ 431: 782-788 ။
တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး function ကို၏အခြေခံမူများထဲမှာ (2002), ကလေးမွေးဖွားထံမှငယ်ရွယ်လူကြီးဖို့ prefrontal cortex ၏ပုံမှန်ဖှံ့ဖွိုးတိုး: သိမြင် functions များ, ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဇီဝဓါတုဗေဒ, eds Stuss ၎င်းကို, နိုက် RT ကို (Oxford တက္ကသိုလ် UP, နယူးယောက်), စစ 466-503 ။
Anderson က JR,
(2004a) microcephalin များ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်း, လူ့ဦးနှောက်အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုဆန်းစစ်နိုင်ရန်။ Hum Mol မျိုးရိုးဗီဇ 13: 1139-1145 ။
Dorus S က,
ASPM ၏ (2004b) အလိုက်ဆင့်ကဲလူသားများအတွက်နှောက် cortical ရဲ့အရွယ်အစား၏အဓိကပစ်မှတ်။ Hum Mol မျိုးရိုးဗီဇ 13: 489-494 ။
Lang N ကို,
Vaituzis AC အ,
ဟမ်ဘာဂါ SD က,
လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ (1996) ဘက်စုံသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်: အသက်အရွယ် 4-18 ။ Cereb Cortex 6: 551-560 ။
Blumenthal J ကို,
လျူ H ကို,
pause T က,
အီဗန် AC အ,
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း (1999) ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု။ နတ် neuroscience 2: 861-863 ။
Dobyns သည့် WB,
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဦးနှောက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြား (2005) မျိုးဗီဇလင့်များ။ နတ်ဗြာမျိုးရိုးဗီဇ 6: 581-590 ။
Gogtay N ကို,
Lusk L ကို,
Nugent TF III ကို။ ,
အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (2004) Dynamic မြေပုံ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 101: 8174-8179 ။
Clasen L ကို,
သာမန်လူ့ hippocampal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (2006) Dynamic မြေပုံ။ Hippocampus 16: 664-672 ။
(2005) မွေးရာပါနားမကြားကလေးငယ်များအတွက် cochlear implantation အဲဒီမှာအရေးပါတဲ့ကာလရှိပါသလား? implantation ပြီးနောက်အမြင်စွမ်းဆောင်ရည်ကြားနာခြင်းနှင့်မိန့်ခွန်းများလေ့လာဆန်းစစ်။ dev Psychobiol 46: 252-261 ။
(2004) ဝေဖန်ကာလစည်းမျဉ်း။ Annu ဗြာ neuroscience 27: 549-579 ။
(2005) ဒေသခံ cortical ဆားကစ်အတွက်အရေးပါကာလ plasticity ။ နတ်ဗြာ neuroscience 6: 877-888 ။
လူမှုရေးအဆင့်အတန်း (ယေးလ် UP, New Heaven, CT) အတွက် (1975) လေး-Factor အညွှန်းကိန်း။
Huizinga M က,
Dolan CV ကို,
ဗန် der Molen မဂ္ဂါဝပ်
အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက် (2006) ခေတ်-related ပြောင်းလဲမှု: ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ငုပ်လျှိုးနေ variable ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Neuropsychologia 44: 2017-2036 ။
Huttenlocher PR စနစ်,
လူ့ဦးနှောက် cortex အတွက် synaptogenesis အတွက် (1997) ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို comp Neurol 387: 167-178 ။
Jacobs R ကို,
Anderson က V ကို
ရလဒ်အပေါ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အချိန်ကိုက်၏သက်ရောက်မှု: focal တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါ (2007) အလုပ်အမှုဆောင် function ကို။ cortex 43: 792-805 ။
Jolicoeur P ကို,
Pontier J ကို,
Pernin MO ကို,
Sempe M က
(1988) လူ့အမြင့်တစ်တစ်သက်တာ asymptotic တိုးတက်မှုနှုန်းကွေး။ biometric 44: 995-1003 ။
(1987) နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက် neocortex ၏အဖှဲ့အစညျး: ဦးနှောက် function ကို၏သီအိုရီအဘို့အဂယက်ရိုက်။ Annu ဗြာ Psychol 38: 129-151 ။
Kabani N ကို,
le Goualher, G,
တစ်ဦးက validation လေ့လာမှု: အလိုအလျောက် 2001-D ကို algorithm ကိုသုံးပြီး cortical အထူ၏ (3) တိုင်းတာခြင်း။ NeuroImage 13: 375-380 ။
(2006) ပေးနိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့် anterior cingulate cortex ။ နတ် neuroscience 9: 940-947 ။
ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် (2004) ထိခိုက်မခံတဲ့ကာလ။ J ကို Cogn neuroscience 16: 1412-1425 ။
Rakic ​​P ကို
ယင်းဟာ Macaque မျောက်နှင့်လူ့ဦးနှောက်၏အမြင်နှင့် somatosensory cortex အတွက်ယာယီ subplate ဇုန် (1990) Developmental သမိုင်း။ J ကို comp Neurol 297: 441-470 ။
ယုဒရှ M က,
Rados M က,
Hrabac P ကို
histochemical အမှတ်အသားများနှင့်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အားဖြင့်ထင်ရှားလူ့သန္ဓေသား cerebrum ၏ (2002) Laminar အဖွဲ့အစည်းက။ Cereb Cortex 12: 536-544 ။
Lee က JK,
Lee က JM,
Kim က SI
(2006) MRI Phantom အသုံးပြု. ကွဲပြားခြားနားသော cortical မျက်နှာပြင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး algorithms ၏တစ်ဦးကဝတ္ထုအရေအတွက် Cross-validation ကို။ NeuroImage 31: 572-584 ။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးနဲ့ဆက်စပ်လူ့ဦးနှောက် cortex အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုအတွက် (2007) ကွာခြားချက်များ။ Hum ဦးနှောက် Mapp, စာနယ်ဇင်းများတွင်။
(2005) cortical ထူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါဝါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်လူဦးရေခြင်း simulation မှတဆင့်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ NeuroImage 24: 163-173 ။
Hampel H ကို,
ကွန်ပျူတာ neuroanatomy အားဖြင့်ဖော်ထုတ်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက် cortical အထူ (2005) Focal ကျဆင်းခြင်း။ Cereb Cortex 15: 995-1001 ။
amblyopia နှင့်အတူလူကြီးများအတွက် (2005) သိမှုဆိုင်ရာအာရုံသင်ယူမှု: လူ့ရူပါရုံ၌အရေးပါသောကာလတစ် reevaluation ။ dev Psychobiol 46: 222-232 ။
Lewis က TL,
မစ္စတာ Maurer: D
လူ့အမြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် (2005) အကွိမျမြားစှာအထိခိုက်မခံကာလ: အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးသားများမှသက်သေအထောက်အထား။ dev Psychobiol 46: 163-183 ။
Jolley J ကို,
တစ်ဦး longitudinal MRI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: (2007) ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျမီးခိုးရောင်အမှု၌ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို phonological အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်တိုးတက်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ Cereb Cortex 17: 1092-1099 ။
Luciana M က,
Yarger သည် RS
(2005) မြီးကောင်ပေါက်အတွက် nonverbal အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ကလေးသူငယ် Dev မှ 76: 697-712 ။
Luna B က,
လူကြီးနှောင်းပိုင်းမှငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ (က 2004) ရင့်ကျက်။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး 75: 1357-1372 ။
(1996) MNI-Display ကို (McConnell ဦးနှောက် Imaging စင်တာ, Montreal အာရုံကြောဌာန Institute, Montreal) ။
(2000) Automated MRI ကနေဦးနှောက် cortex ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်၏ 3-D ကိုထုတ်ယူ။ NeuroImage 12: 340-356 ။
Makris N ကို,
Biederman J ကို,
ခိုင်ဆာ J ကို,
အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင်အာရုံစိုက်မှု၏ (2006) cortical ပါးလွှာအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုကွန်ရက်များ။ Cereb Cortex 17: 1364-1375 ။
Mataga N ကို,
Mizuguchi Y ကို,
တစ်ရှူး plasminogen Active အားဖြင့်အမြင်အာရုံ cortex အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ (2004) အတွေ့အကြုံ-မှီခိုတံစဉ်များကို။ အာရုံခံဆဲလျ 44: 1031-1041 ။
အဟောင်းကိုကမ္ဘာကြီးမျောက်၏ (1982) Insula ။ အဆိုပါ paralimbic ဦးနှောက်၏ insulo-orbito-ယာယီအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဗြဲ Architectonics ။ J ကို comp Neurol 212: 1-22 ။
Nichols T က,
ding J ကို,
Buckholtz J ကို,
Egan M က,
လူ့ဦးနှောက် function ကိုအပေါ် COMT အတွက်ရှုပ်ထွေးမျိုးရိုးဗီဇမူကွဲ၏ (2006) သက်ရောက်မှု။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 11: 867-877 ။
Szeszko P ကို,
Dimtcheva T က,
Gurbani M က,
အိုင်ကျူနှင့်ကျန်းမာလူကြီးများအတွက်ဒေသဆိုင်ရာ cortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စအထူအကြား (2006) ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး။ Cereb Cortex 17: 2163-2171 ။
Levine B က,
ဒန်းနစ် M က
(2005) ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် frontopolar ဧရိယာ၏ cortical ထူ။ NeuroImage 24: 948-954 ။
လူ့ Orbital နှင့် medial prefrontal cortex ၏ (2003) Architectonic subdivision ။ J ကို comp Neurol 460: 425-449 ။
S ကနဲ့ S-PLUS အတွက် (2000) ရောနှောထားသောဆိုးကျိုးများမော်ဒယ်များ (Springer, နယူးယောက်) ။
Puelles L ကို
အဆိုပါနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေနဲ့ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး telencephalic pallium ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အပေါ် (2001) Thoughts ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 356: 1583-1598 ။
(2004) ကို orbitofrontal cortex ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ ဦးနှောက် Cogn 55: 11-29 ။
Shaw P ကို,
Lerch J ကို,
ချွန်ထက် W က,
Giedd J ကို,
Rapoport J ကို
cortical ထူခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်လက်တွေ့ရလဒ်ကို၏ (2006a) longitudinal မြေပုံ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 63: 540-549 ။
Lenroot R ကို,
Rapoport J ကို,
Giedd J ကို
ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် (2006b) အသိဥာဏ်စွမ်းရည်နှင့် cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ သဘာဝ 440: 676-679 ။
(1998) MRI ဒေတာအတွက်ပြင်းထန်မှု nonuniformity ၏အလိုအလျှောက်ဆုံးမခြင်းများအတွက်တစ်ဦးက nonparametric နည်းလမ်း။ ကို IEEE ဖြတ်ကျော် Med Imaging 17: 87-97 ။
cortical ထူခြင်းနှင့်သာမန်ကလေးငယ်များအတွက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ (2004) longitudinal မြေပုံ။ J ကို neuroscience 24: 8223-8231 ။
Yoshii J ကို,
Bansal R ကို,
Zhu H ကို,
အသက် 2007 နှင့် 176 နှစ်အကြား7ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တစ်ခုသို့ဆက်စပ် cortical ထူအတွက် (87) လိင်ကွဲပြားမှု။ Cereb Cortex 17: 1550-1560 ။
ဦးနှောက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် (Sinauer, ဆန်းဒါးလန်း, MA) ၏ (2005) အခြေခံမူ။
sur M က,
အဆိုပါနှောက် cortex ၏ (2005) ပုံစံများနှင့် plasticity ။ သိပ္ပံ 310: 805-810 ။
Whitehouse RH အ,
(1976) ယောက်ျားလေးများနှင့် Harpenden တိုးတက်မှုနှုန်းလေ့လာမှုမိန်းကလေးများအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ကြီးထွား spurt ။ အမ်း Hum Biol 3: 109-126 ။
Zuchner S က,
, ME Payne
(2007) က COMT Val158Met polymorphic ကျန်းမာလူကြီးများအတွက်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး morphometry ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 155: 173-177 ။
ဗန် ERP T က,
Huttunen M က,
Lonnqvist J ကို,
Kaprio J ကို,
Khaledy M က,
Dail R ကို,
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် (2001) မျိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှု။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ 4: 1253-1258 ။
ဗွန် Economo ကို C,
(1925) hirnrinde des erwachsenen menschen (Springer ဘာလင်) dytoarchitektonik der Die ။
(1967) အစောပိုင်းအသက်တာ၌ဦးနှောက်၏ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်, ဦးနှောက်၏ဒေသဆိုင်ရာရငျ့၏ myelinogenetic သံသရာ, Minokowski တစ်ဦးက (ဘလက်ဝဲလ်သိပ္ပံ, အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်) ed ။
Forghani R ကို,
(2002) အလိုအလျောက် "ပိုက်လိုင်း" လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အ 3-D ကို MRI အချက်အလက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: မျိုးစုံနဗ်ကြောဖို့လျှောက်လွှာ။ ကို IEEE ဖြတ်ကျော် Med Imaging 21: 1280-1291 ။
Zilles K သည်,
Palomero-Gallagher N ကို,
(2004) transmitter receptors နှင့်ဦးနှောက် cortex ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ။ J ကို Anat 205: 417-432 ။
Zinkstok J ကို,
Schmitz N ကို,
ဗန် Amelsvoort T က,
က de ဝင်း M က,
ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က,
Baas က F,
ကျန်းမာနုပျိုလူကြီးများအတွက် (2006) က COMT val158met polymorphic နှင့်ဦးနှောက် morphometry ။ neuroscience လက်တ 405: 34-39 ။
Developmental ညှိနှိုင်းရေး Disorder နှင့်အတူကလေးများအတွက် Visuospatial အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ်အတွက်လိုငွေပြမှုအပေါ် Cardiorespiratory ကြံ့ခိုင်ရေးစွမ်းရည်မြှင့်များ၏ဆိုးကျိုးများ: တစ်ဦးကသိမှု Electrophysiological လေ့လာ 1-2014: လက်တွေ့ Neuropsychology, 29 မတ်လ 2, 173 (185) ၏မော်ကွန်း
လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် subcortical ခန္ဓာဗေဒ၏ longitudinal လေးရှုထောင်မြေပုံ PNAS, 28 ဇန်နဝါရီလ 2014, 111 (4): 1592-1597
နှောင်းပိုင်းတွင်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လူမှုရေးဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ, 1 ဇန်နဝါရီလ 2014,9(1): 123-131
လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးစဉ်အတွင်းဦးစားပေး Detachment: Age- နှင့်ပျံ့ Tensor Imaging (DTI) ဒေတာများအတွက်လိင်-Specific ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆက်သွယ်မှု ဦးနှောက် Cortex, 15 ဒီဇင်ဘာလ 2013,0(2013): bht333v1-bht333
တည်းကကုသမှုမရှိဘူးတယောက်အတွက် cortical ထူ ဦးနှောက် Cortex, 1 ဒီဇင်ဘာလ 2013, 23 (12): 2855-2862
အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွင်းတက်ကြွစွာထိန်းချုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: ကလေးငယ်များအတွက်စောင့်ကြည့်မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှ Active ကိုပြန်လည်ရယူခြင်း အပြုအမူဖွံ့ဖြိုးရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 26 နိုဝင်ဘာလ 2013,0(2013): 0165025413513202v1-165025413513202
ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏နယူးနားလည်မှု: ရေရှည်အခြေအနေများနှင့်အတူလူငယ်များ၏အဘို့အသငြ်ကူးေူပာင်းမြကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန်ဆက်စပ်မှု 1-2013: ကလေးဘဝ, 98 နိုဝင်ဘာလ 11, 902 (907) တွင်ရောဂါ၏မော်ကွန်း
ADHD အတွက်ဦးနှောက် cortical ထူ: အသက်အရွယ်, လိင်နှင့်လက်တွေ့ဆက်စပ်မှု အာရုံစူးစိုက်မှု Disorders ၏ဂျာနယ်, 1 နိုဝင်ဘာလ 2013, 17 (8): 641-654
အသက်၏2နှစ်မှမွေးဖွားခြင်းကနေမြေပုံဒေသကြီး-Specific longitudinal cortical ရဲ့ Surface ချဲ့ ဦးနှောက် Cortex, 1 နိုဝင်ဘာလ 2013, 23 (11): 2724-2733
Spina Bifida Myelomeningocele အတွက် Atypical cortical အဖွဲ့ functional သိသိသာသာ: အိုင်ကျူနှင့် Fine မော်တော် Dexter နှင့်အတူ cortical ထူခြင်းနှင့် Gyrification ၏ဆက်ဆံရေး ဦးနှောက် Cortex, 1 အောက်တိုဘာလ 2013, 23 (10): 2357-2369
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလူ့ဦးနှောက် Cortex ပြားစေ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 18 စက်တင်ဘာလ 2013, 33 (38): 15004-15010
ဒေသဆိုင်ရာမွေးကင်းစကလေးဦးနှောက်ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး:3အတွက်တစ်ဦး MRI-အခြေပြု Morphometric ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း 13 လအသက် ဦးနှောက် Cortex, 1 စက်တင်ဘာလ 2013, 23 (9): 2100-2117
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဦးနှောက်ကွန်ယက်၏အဖွဲ့ထဲမှာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ ဦးနှောက် Cortex, 1 စက်တင်ဘာလ 2013, 23 (9): 2072-2085
Cortico-Amygdala-Striatal Circuits အဆိုပါမျောက် Amygdala မှတဆင့် hierarchical subsystem အဖြစ်ဖှဲ့စညျးနေ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 28 သြဂုတ်လ 2013, 33 (35): 14017-14030
အဆိုပါ Medial Prefrontal Cortex နဲ့ဆယ်ကျော်သက်အတွက်ကိုယ်ပိုင်သတိ Emotion ၏ပေါ်ထွန်းရေး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 1 သြဂုတ်လ 2013, 24 (8): 1554-1562
အမြင့်အိုင်ကျူများ၏သဘာဝနှင့်ပွား: အသိဥာဏ်ဖွံ့ဖြိုးရေးတစ်ခုတိုးချဲ့ထိခိုက်မခံတဲ့ကာလ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 1 သြဂုတ်လ 2013, 24 (8): 1487-1495
မျက်နှာထုတ်ယူခြင်းအပေါ်အသက်အရွယ်, Task ကိုစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုးကျိုးများ ဦးနှောက် Cortex, 1 ဇူလိုင်လ 2013, 23 (7): 1630-1642
ယင်းချင်ပန်ဇီမျောက် neocortex အတွက်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံဆဲလျ dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်၏ Synaptogenesis နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလူသားမြားသညျပုံနဲ့ဆင်တူတယ် PNAS, 18 ဇွန်လ 2013, 110 (Supplement_2): 10395-10401
စိုးရိမျ / နှိမ့်ရောဂါလက္ခဏာများကျန်းမာရေးကလေးများနှင့်လူငယ်လူကြီးများအတွက်ညာဘက် Ventromedial Prefrontal cortical ထူရင့်ကျက်ဖို့လင့်ခ်လုပ်ထားသောနေကြတယ် ဦးနှောက် Cortex,7ဇွန်လ 2013,0(2013): bht151v1-bht151
Autism Spectrum Disorders အတွက် Cingulate Cortex နှင့် Insula အတွက် cortical ရဲ့ Surface ဧရိယာပေါ် Diagnosis, ခေတ်နှင့်ရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု 1-2013: ကလေး Neurology, 28 ဇွန်လ 6, 732 (739) ၏ဂျာနယ်
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: လူမှုအကဲဖြတ်ဖို့အာရုံ စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံ, 1 ဧပြီလ 2013, 22 (2) တွင်လက်ရှိလမ်းညွှန်များ: 121-127
12- အတွက်တရားစကားတော်နားလည်မှုအဘို့အရေးကြီး cortical ဒေသများအတွင်းတစ်ရှူးထုတ်လွင့် Properties ကိုအတွက်ခေတ်-ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများ 19-လအဘိဓါန် Old ရင်သွေးငယ်များသည်မှ ဦးနှောက် Cortex, 28 ဖေဖော်ဝါရီလ 2013,0(2013): bht052v1-bht052
longitudinal အိပ်ပျော်ခြင်း EEG ဘယ်နေရာတွေမှာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ရငျ့၏ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများညွှန်ပြ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ် - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ပေါင်းစည်းမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဇီဝကမ္မဗေဒ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၃၊ ၃၀၄ (၄): R15-R2013
လူ့ cortical ကွန်ယက်အတွက်ရင့်ကျက်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ Covariance ၏ Convergence အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 13 ဖေဖော်ဝါရီလ 2013, 33 (7): 2889-2899
အများစုလူနည်းစုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတစ်ခုမြို့ပြနမူနာများတွင်ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုအကြားတွင် longitudinal ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး မူးယစ်ဆေးကိစ္စများ, 1 ဇန်နဝါရီလ 2013, 43 (1) ၏ဂျာနယ်: 103-118
အိုအတွက်စိတ်ဖောက်ပြန်သို့မဟုတ် Universal မှထူးခြားသော: cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်အရှိန်မြှင်? ဦးနှောက် Cortex, 12 ဒီဇင်ဘာလ 2012,0(2012): bhs379v1-bhs379
Voxel-အခြေပြု Morphometry နှင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ multimode နေရာများ၏လက်စွဲကှကျခွငျးအားဖွငျ့ Generated ထုထည်ကြီးမားသောဒေတာများအကြားတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် Neuroradiology ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 1 နိုဝင်ဘာလ 2012, 33 (10): 1957-1963
2 နှစ်မှမွေးဖွားခြင်းမှသည် cortical နှင့် Subcortical gray matter ၏ longitudinal ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဦးနှောက် Cortex, 1 နိုဝင်ဘာလ 2012, 22 (11): 2478-2485
လူ့ neocortical ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာ myelination PNAS,9အောက်တိုဘာလ 2012, 109 (41): 16480-16485
အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုမမှန်အတွက်လူမှုရေးဦးနှောက်ဆားကစ်၏အစိတ်အပိုင်း ဦးနှောက်, 1 စက်တင်ဘာလ 2012, 135 (9): 2711-2725
နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့လူသားများနှင့် postnatal ဦးနှောက်ရငျ့အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုးတက်မှုနှုန်း PNAS, 10 ဇူလိုင်လ 2012, 109 (28): 11366-11371
ရေရှည် amygdala ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကနေရရှိလာတဲ့ cortical shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အတွက်အပြောင်းအလဲများ လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ, 1 ဇွန်လ 2012,7(5): 588-595
ကလေးငယ်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-related ဦးနှောက် circuitry ၏နုပေါင်းစည်းမှုနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု PNAS, 15 မေလ 2012, 109 (20): 7941-7946
စိတ္တ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးစဉ်အတွင်းတိုးတက်ရေးပါတီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ Schizophrenia သတင်းလွှာ, 1 မေလ 2012, 38 (3): 519-530
ပုံမှန်မဟုတ်သော cortical ထူသန္ဓေသားအရက် Spectrum Disorders အတွက် ALTER နှင့်မျက်နှာ Dysmorphology နှင့်အတူသူတို့၏ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ဦးနှောက် Cortex, 1 မေလ 2012, 22 (5): 1170-1179
လိင်, အပျိုဖော်ဝင်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ရငျ့တိုင်းတာအိပ်ပျော်ခြင်း EEG ၏အချိန်ကိုက် PNAS, 10 ဧပြီလ 2012, 109 (15): 5740-5743
အဆိုပါ Developing ဦးနှောက်ထဲမှာသိုလှောင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် Dissociating: နေ့ရက်များနှိုင်းယှဉ်မိနစ်အကြာတွင်သတိရပါအတွက် Hippocampal Volume ကိုနှင့် cortical ထူ၏အခန်းက္ပ ဦးနှောက် Cortex, 1 ဖေဖော်ဝါရီလ 2012, 22 (2): 381-390
Rostrolateral Prefrontal Cortex အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကျော်တိုးမြှင့် Functional selection အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 23 နိုဝင်ဘာလ 2011, 31 (47): 17260-17268
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနေအိမ်အတွက်လူကြီးအဆင့်မှဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုေူပာင်းလဲရေးထောက်ပံ့ ကလေးအထူးကု, 1 ဇူလိုင်လ 2011, 128 (1): 182-200
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ Cortex တိုးတက်ကြီးပွားပါသလား? အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 11 မေလ 2011, 31 (19): 7174-7177
Schizophrenia အတွက် cortical Disinhibition ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစတင်ခြင်း: တိရိစ္ဆာန် & Models မှစ. Insights Schizophrenia သတင်းလွှာ, 1 မေလ 2011, 37 (3): 484-492
Schizophrenia ၏စတင်ခြင်း၏အသက်: ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ Neuroimaging လေ့လာရေး မှစ. ပတ်သ က်. Schizophrenia သတင်းလွှာ, 1 မေလ 2011, 37 (3): 504-513
အသစ်ကစတင်ခြင်းကလေးအထူးကုဝက်ရူးပြန်ရောဂါအတွက်အလားအလာ neurodevelopmental ပြောင်းလဲမှုများပုံပျက်သော-based morphometry ဦးနှောက်, 1 ဧပြီလ 2011, 134 (4): 1003-1014
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သည်အထိအခြေအနေများကွောကျရှံ့ခွငျး၏ Long-Term Extinction ၏ Immunohistochemical ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း ဦးနှောက် Cortex, 1 မတ်လ 2011, 21 (3): 530-538
အပျိုဖော်ဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Maturity များအတွက်ကိုက်ညီမိန်းကလေးများသန်း Boys အတွက်ကွဲပြားခြားနားသော Medial ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးနှင့် cortical gray matter ရင့်ကျက်သြဇာလွှမ်းမိုး ဦးနှောက် Cortex, 1 မတ်လ 2011, 21 (3): 636-646
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တိုင်းတာ cortical ထူအပေါ်စေ့ဘဲမွေးဖွားခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ ဦးနှောက် Cortex, 1 ဖေဖော်ဝါရီလ 2011, 21 (2): 300-306
သင်္ကေတ, ္တုများနှင့်မျက်နှာ cortical ကိုယ်စားပြုအစောပိုင်းကလေးဘဝစဉ်အတွင်းသို့ပြန်သွားရန် Pruned နေ ဦးနှောက် Cortex, 1 ဇန်နဝါရီလ 2011, 21 (1): 191-199
အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်နှင့်အတူအကဲဖြတ်အထီးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများ လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ, 1 ဇန်နဝါရီလ 2011,6(1): 2-11
ကလေးများအတွက် Episode နှုတ်မှတ်ဉာဏ် encoding က၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ fMRI လေ့လာမှု အာရုံကြော,7ဒီဇင်ဘာလ 2010, 75 (23): 2110-2116
အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုမမှန်အတွက်ခေတ်-related ယာယီနှင့် parietal cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ် ဦးနှောက်, 1 ဒီဇင်ဘာလ 2010, 133 (12): 3745-3754
အတူတကွကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အပြင်ကြီးထွားလာ: Functional Homotopy ၏သက်တမ်း Developmental ဒုံးကျည်သွားလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာနှင့်လိင်ကွာခြားချက်များ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 10 နိုဝင်ဘာလ 2010, 30 (45): 15034-15043
Dyslexia ၏စာဖတ်ခြင်း-Related ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သမိုင်းမှ gray matter Volume ရဲ့ဆက်ဆံရေးများအတွက်ဧရိယာ Accounts ကို Surface ဦးနှောက် Cortex, 1 နိုဝင်ဘာလ 2010, 20 (11): 2625-2635
ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်ထဲမှာ network-level ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ covariance PNAS, 19 အောက်တိုဘာလ 2010, 107 (42): 18191-18196
အသက်တာ၏ပထမဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း cortical လှုပ်ရှားမှု၏မြေပုံ: တစ်ဦးက Hight-Density အိပ်စက်ခြင်း Electroencephalogram လေ့လာ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,6အောက်တိုဘာလ 2010, 30 (40): 13211-13219
longitudinal မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လူ့ cortical ရငျ့၏ဒိုင်းနမစ်အပေါ်လိင်နှင့်အန်ဒရိုဂျင်အချက်ပြ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပုံဖော် PNAS, 28 စက်တင်ဘာလ 2010, 107 (39): 16988-16993
fMRI အသုံးပြုခြင်းတစ်ဦးချင်းဦးနှောက် Maturity ၏ခန့်မှန်းချက် သိပ္ပံ, 10 စက်တင်ဘာလ 2010, 329 (5997): 1358-1361
လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်း cortical တိုးချဲ့အလားတူပုံစံများ PNAS, 20 ဇူလိုင်လ 2010, 107 (29): 13135-13140
ထူးခြားသောနှင့် Subacute အချိန်-ကြေးခွံကျော်တစ်ဦးချင်းဘာသာရပ်များအတွက် Precentral နှင့် Postcentral cortical ပေမဲ့အထူ၏ profiles ဦးနှောက် Cortex, 1 ဇူလိုင်လ 2010, 20 (7): 1513-1522
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်ကိုယ်ပိုင်-Generated Thoughts ၏ရွေးချယ်ရေးနှင့်ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,2ဇွန်လ 2010, 30 (22): 7664-7671
အသက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်တစ်ဦးခုနှစ်တွင် Vivo MRI လေ့လာမှု: Autism Spectrum Disorder အတွက် cortical ခန္ဓာဗေဒ ဦးနှောက် Cortex, 1 ဇွန်လ 2010, 20 (6): 1332-1340
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့် prefrontal cortex အတွက်အာရုံခံ H3K4me3 ပီဂြီနိုမျတစ်ဦးချင်းခြားနားချက် PNAS, 11 မေလ 2010, 107 (19): 8824-8829
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက်ဦးနှောက်ရင့်ကျက်: ဒေသဆိုင်ရာခေတ်-Related cortical ထူနဲ့ White ကအရေးပါ Volume ကိုနှင့် Microstructure အတွက်အပြောင်းအလဲများ ဦးနှောက် Cortex, 1 မတ်လ 2010, 20 (3): 534-548
အဘယ်အရာကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လှုံ့ဆျောပေးသလဲ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖြတ်ပြီးဆုကြေးအာရုံဖြန်ဖြေဦးနှောက်နေရာများ ဦးနှောက် Cortex, 1 ဇန်နဝါရီလ 2010, 20 (1): 61-69
8 နှစ် 30 ကနေဦးနှောက်ရင့်ကျက်တဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ကလေ့လာမှု: Subcortical ဦးနှောက်ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 23 စက်တင်ဘာလ 2009, 29 (38): 11772-11782
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဦးနှောက်၏ Schizophrenia နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အတ္တ ဟူ. သော်လည်းကောင်းရငျ့ ဦးနှောက်, 1 စက်တင်ဘာလ 2009, 132 (9): 2437-2448
တံစဉ်ဆဲလ်ရောဂါနှင့်အတူကလေးများအတွက်ဒေသတွင်းသီးခြား cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ် ဦးနှောက် Cortex, 1 ဇူလိုင်လ 2009, 19 (7): 1549-1556
ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ရငျ့၏အညွှန်းကိန်းများအဖြစ် Non-လျင်မြန်စွာမျက်စိလှုပ်ရှားမှုမြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် theta EEG ၏ longitudinal ဘယ်နေရာတွေမှာလဲ PNAS, 31 မတ်လ 2009, 106 (13): 5177-5180